ဒေါ်စု၏ ပုဂံ၊ပုပ္ပါး၊ညောင်ဦး ရောက် ဓာတ်ပုံများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်စု၏ ပုဂံ၊ပုပ္ပါး၊ညောင်ဦး ရောက် ဓာတ်ပုံများ
ဒေါ်စု၏ ပုဂံ၊ပုပ္ပါး၊ညောင်ဦး ရောက် ဓာတ်ပုံများ
Posted by ဂျစ်စူ on Jul 7, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 34 comments
ပုဂံ၊ညောင်ဦး၊ပုပ္ပါး သို့ ခရီးထွက်ခွာခဲ့တဲ့ အမေစုရဲ့ဓာတ်ပုံများ တွေ့ မိသလောက် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်ဘုရားတွေဖူးခဲ့ပြီး ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတော့ဓာတ်ပုံများကြည့်၍ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျ။ပြီးတော့ ပုံဂံခရီးစဉ် နောက်ဆုံးအဖြစ် ညောင်ဦး မဏိစည်သူ ဈေးကိုရောက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလဲ ပါသဗျ။အဲ…အဓိကဓာတ်ပုံရရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ Irrawaddy,AP,ဒီမိုဝေယံ တို့ မှဖြစ်ပြီး Credit မပေးခဲ့မိတဲ့ ပုံပိုင်ရှင်များရှိပါကလဲ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ …။
ပုံတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါတွေ ဘယ်သူ စီစဉ်ထားတာလဲ။
ဘယ်ကျောင်းက ကလေးတွေ ခေါ်ထားတာလဲ။
ဘယ် ချာမ ဦးစီးတာလဲ
ကိုရွှေမင်းသားက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတို့ ကြေးမုံ သတင်းစာတို့အကြည့်များတယ်ထင်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တန်ဘိုးအရှိဆုံး အမျိုးသမီးရဲ့ အဖိုးအတန်ဆုံးအချိန် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်ကို အချိန်ဖြုန်းပြစ်လိုက်ကြတယ်။
ပြီးတော့လဲ နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီး မဆုံးရှုံးခြင်တော့ဘူး
လူထု ခေါင်းဆောင်ကို ကြိုဆိုပါတယ်…
ပုဂံဟာ.. ပုဂံ ပဲလေ…သွားရမှာပေါ့….
သူနဲ့ သူ့လူတွေ ဘာတွေလုပ်မလဲ ဆိုတာလည်း သိချင်ပါသေးတယ်…
တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူက တိုင်းပြည်ကို…ဘယ်လို ပုံဖော်မလဲ ဆိုတာ အရေးကြီးလှပါတယ်..
ဗိုလ်ချုပ်နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့တုန်းကတော့.. ငါ အဖမ်းမခံနိုင်ဘူး.. ငါ့မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်…
အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ဖို့ အာဏာရှင်တွေ မျက်စေ့ နောက်မယ့် ကိစ္စတွေကို ရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်..
ဂျပန်ကို တော်လှန်ဖို့တောင် အချိန်မကျသေးခင် နေသင့်သလို နေခဲ့တာပါ…
ဒေါက်တာ ဘမော်လည်း ထို့အတူပါပဲ…. တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ကယ် လုပ်တာပါပဲ…
NLD က ပုဂ္ဂိုလ်တွေက စစ်သားဆိုသွား.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးဆို ဂိုး… ဆိုပြီး..
လက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့….လက်တွဲပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်တာတောင်….
လက်ကိုင်တုတ်လို့ ခေါ်တဲ့လူရှိတယ်… ဓါးမနောက်ပိတ်ခွေးလို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်…..
ပုံတွေ အတွက် ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်…
ဟုတ်တယ်နော် ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့ လေးစားပါတယ် သူသာ နှစ် ၂၀လောက်အဖမ်းပဲခံနေရရင် လွတ်လပ်ရေးဘယ်ရခဲ့မလဲ မေးကြည့်တော့ရွာကလူတွေဟာ(မိမိမွေးရပ်ကိုပြောပါတယ်) ဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေ နိုင်ငံေ၇းကို သိပ်နားလည်တာမဟုတ်ပါဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗိုလ်ချုပ်သမီးဆိုပြီး ချစ်ကြတာများပါတယ်။
ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ကလေးလဲ ၁ ယောက်မှမတွေ့ပါလား ရွှေမင်းသားရယ်
တချို့ပုံတွေက မမြင်ဘူးသေးဖူး။ ကျေးဇူးပါ….
တစ်ချို့ပုံတွေကိုကြည့်ဖူးပင်မယ့် မကြည့်ရသေးတဲ့ ပုံတွေလဲ ပါတယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ဒီတခါတော့ အန္တရာယ်ကင်း၊ ဘေးကင်းမှာပါ၊ သူ့သားကိုယ်တိုင်လိုက်ပါနေတော့ အလွယ်တကူ ထိရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိရင်နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။
အင်ကြင်းတောရကို ရောက်ခဲ့တဲပုံတွေ ဒီအောက်မှာတွေ့ မိသေးပါတယ်..
Edit လုပ်ပြီး ထပ်ဖြည့်လို့ မရတော့လို့ ..ကိုယ့်ဘာသာပဲ သွားကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ တော်တော်၊ ထက်ထက် ၊ အရည်အချင်းရှိရှိ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ခွင့်ရဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသား ဇနီးဖြစ်နေတော့ အကြောင်းပြ လို့ ကောင်းသွားတာပေါ့။
မင်းဒီစကားမျိုးမှ ပြောပါ့မလားလို့။ ရှေ့ကမင်းရဲ့ကွန်မန့်မှာ ကထဲက စောင့်ကြည့်နေတာ။ တခါလာလဲ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ မင်းတို့ပြောတတ်တာ ဒါပဲရှိလား။ အခုဒီဆိုက်ကလည်း မင်းအမေလင် စီအိုင်အေက ပိုက်ဆံပေး ဖွင့်ထားတာဟေ့။
ကို big cat
ကျွန်တော့်စာကိုအသေအချာ၊ အထပ်ထပ်အခါခါ ဖတ်ကြည့်ပါဦး၊ စာရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ ဆိုတာ အထပ်ထပ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒါမှ မူရင်းအနက်နဲ့ ဂယက်အနက် မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ တော်တော် အရေးအသားညံ့လွန်းနေပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆလိုက်ပါမယ်။ သိပ်ပြီး ဒေါသရှေ့မထားပါနဲ့။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရသလို ကျေနပ်မိပါတယ်…။ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့ပုံ အပေါ်ဆုံးပုံက သက်သေပြနေပါတယ် ။
ရွှေမင်းသားရေ…။ ဘယ်လိုမျက်မှန်တပ်ကြည့်တာလဲ?..။ ဘယ်လို မှန်ဘီလူးနဲ့ ချဲ့ကြည့်တာလဲ?…။
သူများတွေမမြင်တာတွေ ခင်ဗျားမြင်နေတာ..။ ထူးဆန်းပါပေ့..။
ချက်ချင်းမပေါ်နိုင်ဘူးပြောလို့ ၃ – ၄ ခေါက်လောက် Revision ပြန်သွားတယ်
Thank you very much, Pauk Phaw
Wishing all the best to A May Su….
nobody insisted to welcome …… therefore the felling of faces is very different from the
other photos. They showed their own feeling, this is the real taste of freedom, I think.
ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူထုစိတ်ဝင်စားသော သမိုင်းတင်မယ့်ပုံတွေပါ။
အမေစုလာရင်မကြိုဆိုဘူးရလို့ မြို့နယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဘုရားဂေါပကတွေကို ညွန်ကြားထားပေမယ့်။ပြည်သူချစ်တဲ့ အမေကိုပြည်သူတွေက ရင်ထဲအသည်းထဲက လိူက်လိူက်လှဲလှဲကြိုဆိုတာပါ။ဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ အမေထာဝရရှိနေပါတယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာပဲ။အမေရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲယုံကြည်ချက်တွေဟာ သိသာထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ပုံတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..။
အမေစုကို ပြည်သူတွေချစ်တယ်၊ လေးစားတယ်ဆိုတာ အမှန်ကိုမြင်တတ်သူတိုင်း သိပါတယ်ဗျာ….
ဒီတစ်ခေါက် အမေစုဘေးမှာ အမေစုရဲ့ သားတစ်ယောက်လုံးပါလာတာ ပိုပြီးတော့ အားရပါတယ်….
ဒါပေမယ့် ဂျပန်သတင်းထောက်ကိုတောင် ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ ထုံးကရှိထားတော့…. ဘာပဲပြောပြော အမေစုကို ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် အန္တရယ် ကင်းလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…
ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး..ရပြီးမှ အဲဒီခရီးကိုသွားတာလို့ထင်တယ်..။ဘာဘေးအန္တရာယ်မှရှိမယ် မထင်မိပါဘူး..။
သားငယ်ကို မြန်မာပြည်နှလုံးသားနေရာ..(ဗီဇာမကုန်ခင်အထိ) လိုက်ခေါ်ပြတာလားပဲ..။
မြေးတွေလည်း တွေ့ချင်ရှာမယ် ထင်မိပါတယ်.။
အခုလို ပုံတွေကို တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
http://anzartone.freezoka.net မှာ တင်ချင်လို့ ခွင့်ပြုပါဗျာ … နော်။
ကျနော်လဲ..နေရာစုံက ရသလောက်လိုက်စုပြီး Upload ပြန်တင်ထားတာပါပဲ
လူတွေအားလုံး ပကတိ အပြုံးနဲ့။
လူတွေအားလုံး ကြည်နူးတဲ့ အပြုံးနဲ့။
လူတွေအားလုံး ကြည်ညိုတဲ့ အပြုံးနဲ့။
အမေကတော့ ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့် ပြုံးနေတာပဲ
“ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ”
အထူးကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေပါဘဲ ကူးထားလိုက်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ
တစ်အိမ်တစ်ယောက် မကြိုမနေရဆိုတဲ့မူမချထားပါဘူး အသဲနှလုံးထဲက ဖြစ်တဲ့ချဉ်ခြင်းတပ်မက်မှုအရ တွေ့ချင်နေကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ် ပုံလေးတွေ အတွက် ပုလင်းလက်ထဲကမချတဲ့ကိုပေါက်ဖေါ်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်